Ingqondo yeMveliso eNkulu elandelayo yeApple yeMac, iSpin | Ndisuka mac
Siphetha namhlanje ngokunqonqoza kwimeko yangoku etshayela amaziko emfundo kwaye abanye abalandeli be-apile elilumkileyo basebenzise ukucinga ukuba ingaba yeyiphi na imveliso elandelayo ye-Apple, iSpin.
Njengoko unokuba ubonile okanye uthengile abantwana bakho, into yokudlala efashini phakathi kwabakwishumi elivisayo yi-Spinner, isixhobo esijikelezayo esisebenza ukunciphisa amanqanaba oxinzelelo kunye nokwandisa uxinzelelo lwabantwana ... ebatsho ke abo babone ingqaqa kwinto yokudlala ...
Ewe, umbono sele uqalile ukujikeleza kuthungelwano lwento iSpinner exutywe nayo Apple Watch kunye nesixhobo sokucofa iMac.Ingaba yiSpin. Sikwi-202nd kwaye umdlalo wefashoni ka-2017 uguqukele kwimveliso entsha ngokupheleleyo evela eCupertino.
Njengoko ubona kumfanekiso wentloko ISpin iphindwe kabini njengefowuni, ikhalenda kunye nokukhetha izixhobo ezithile ezinokudityaniswa njengeTouch Bar yeMacBook. Ngaba iMicrosoft ayinaso isikhethi esijikelezayo osibeka kwiscreen sekhompyuter yakho enkulu? Ngaphandle kwamathandabuzo iya kuba yimveliso njengoko iqhubeka nokuhamba kwayo, iya kufikelela kumanqanaba aphezulu kakhulu okuthengisa.
Ungathandabuzi kwaye cinga malunga nokuba ungasisebenzisa kangaphi iSpin kubomi bakho bemihla ngemihla. Ngubani owaziyo ukuba omnye wabakwishumi elivisayo odlala ngoku i-Spinner yinjineli yehardware ekugqibeleni eyicebisileyo e-Apple?
Kulungile zihlobo, emva kwalomzuzu apho bendifuna ukuqala ukuhleka okumbalwa kuwe, masicinge ukuba Nge-5 kaJuni ikufutshane nekona yeWWDC 2017 elandelayo kwaye iza ilayishwe ziindaba ukuba ngokuqinisekileyo ulinde njengamanzi kaMeyi ... nangoJuni.
PS Namhlanje owayesakuba ngumfundi wandibuza ... UPedro ngaba yinyani ukuba iApple izakukhupha iSpin? Inqaku eliphambili likaCristopher lelenzelwe wena! Ihagi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ingqondo yemveliso enkulu elandelayo ye-Apple yeMac, iSpin
I-Apple isusa iipowusta ezigubungele ngaphakathi kwiVenkile yeApple eSingapore